Guddiga la dagalaanka badeecooyinka been abuurka ah wacyegelin iyo seminaar fidin doono. – iftiin fm
Guddiga la dagalaanka badeecooyinka been abuurka ah wacyegelin iyo seminaar fidin doono.
July 23, 2020 Iftiin FM Reporter 0 Comment
Guddiga la dagalaanka badeecooyinka been abuurka ah ayaa sheegay in dowladaha countiyada uu ka qeybgalinaya dagaalka ka dhanka ah badeecadaha been abuurka ah oo ku sii faafaya suuqyada kala duwan ee dalka .
Sarakiisha guddiga la dagalaanka badeecooyinka been abuurka ah ayaa waxay sheegeen in wacyegelin iyo seminaar loo fidinaya daneeyayaasha countiyada si ay uu aqoonsadaan oo ay gacanta ugu dhigaan badeecooyinka been abuurka .
Madaxa fulinta guddiga la dagalaanka badeecooyinka been abuurka ah Elema Halake ayaa sheegay in marka ugu horeysay ay qaadi doonan dagaal ka dhan ah soo saarista iyo iibinta qalabyada leyskiiga ilaaliyo cudurka Corona oo tayadoodu ay hooseyso
Madaxa fulinta guddiga la dagalaanka badeecooyinka been abuurka ah Elema Halake ayaa carabka ku dhuftay in badeecooyinka been abuurka ay ka hor istagaan shirkadaha wax soo saarka , ganacstada iyo macamiisha in ay helaan badeecooyin tayadoodu ay sareyso .
Mr Elema Halake ayaa sheegay in la sameeyo guddiga oo ay ku jiraan dowladaha countiyada oo la dagalaamaya badeecooyinka been abuurka ah .
Dhanka kale guddomiyaha guddiga la dagalaanka badeecooyinka been abuurka ah Flora Mutahi ayaa sheegtay in mudnaanta koowaad la saaraya dagaalka ka dhanka ah badeecooyinka been abuurka ah iyo ganacsiga sharci darada ah
← DHAGEYSO: Barnaamijka wax soo saarka beeraha gobolka woqoybari .
Khilaaf iyo muraan xoogan oo ka taagan ururka KNUT. →